Archive du 20161216
Augustin Andriamananoro Nidoboka eny Antanimora
Taorian�ny nisamborana an�i Augustin Andriamananoro ny sabotsy lasa teo sy nitazonana azy tany Miarinarivo dia nampidirana am-ponja vonjimaika eny Antanimora ny tenany rehefa nampandalovina teny amin�ny fampanoavana Anosy omaly.
FFKM Manjaka eto ny kolikoly
Hentitra ny fanambaran�ny FFKM izay nivory tany Toamasina ny faramparan�ny volana novambra lasa teo manoloana ny raharaham-piangonana sy ny fiainam-pirenena amin�ny ankapobeny.
Fisamborana an�i Augustin Andriamananoro Fitsipahana ny fihavanana, hoy ny Mapar
Nanoloana ny fisamborana ny mpikambana ao amin�ny vondrona politika Mapar, Augustin Andriamananoro, dia namoaka fanambarana mikasika ny tsy fankasitrahan�izy ireo tetsy amin�ny foibeny etsy Ambodivona, ity vondrona ity omaly.
Filohan�ny HAFARI Malagasy Marary mafy ao am-ponja
Marary mafy ao amin�ny fonjaben�Antanimora amin�izao fotoana izao ny filoha nasionalin�ny fikambanana HAFARI Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina.
Fakon�ny tan�nan�i Toliara Hahodina ho zezika sy etona fandrehitra
Am-perinasa ny foibe hanodina ny fakon�ny tan�nan�i Toliara ho lasa zezika sy hamokarana etona fandrehitra ary gazoala, ao Amboriha, Kaominin�i Belalanda, Toliara faha-2.